Imihlinzo-Khohlwa if awuzelwanga nge06 September | imihlinzo
imihlinzo 0 Comment Jun 15, 2020
Ocean Finance uthi uyifumene into yokuba zeziphi iintsuku zoku zalwa ezi noku chazela into yokuba ungasiso isinhanha na. Bathi lukhona usuku neNyanga elile lona libhetere kunazo zonke ezinye iinstuku zonyaka, oluchaza ukuba ungaphumelela na ebomini.
Bathi baqaphele ukuba i6th kaSeptember lelona suku luza nempumelelo xa uzelwe ngalo.
Abadidiyeli beGin benze impazamo enobungozi
Kuya funyaniswa iNenekazi eliphangelela lomzi waba didiyeli liye lenza impazamo enobungozi kakhulu. Unobangela kukuphangela kwakhe engaphilanga. Uthi xa sele befumanisile ukuba impazamo iye yaphi na. Uqaphele ukuba kubhidaniswe iibhotile ebezi thwele iiSanitizer zaze zapakishwa kwii-Cases zeGin.
Unobangela woku ngaphili kwakhe, kusukela kwiingxaki zakhe zase khaya angena kuzi chaza. Yilonto yoku ngakwazi ukuthetha ngazo emsebenzini ebangele ukuba aqhubeke engaziva mnandi. Zabhidana ke zona iiKomityi. IiNkampani ingxengxezile kuba thengi boludidi lwabo lweGin. Yacela ukuba kuye kwakho ubani ofumene lebhotile inezi sanitizers, bancede bazi buyise.
Baphelile eKasi zizisu ngelo xesha.
Nazo iimpuku zintathu, ziya xhomelana apha ngoMalume bazo. Into yokuba owam uMalume yingwenya. Ithi impuku yoku qala, jonga owam uMalume yingwenya. Uyabona laPoison yeMpuku, iPink ingathi zilekese. Ithi leMpuku, owam uMalume laPoison uyitya laWay yePeanuts xa eyitya, ingamenzi niks…laPoison leya.
Uyadlala wena…kutso le yesibini. Islarhestile ujima ngaso owam uMalume. Njeng’ba sinala tension nje, ujima ngaso owam uMalume. Kuqondwe kulindwe le yoku gqibela iMpuku inguSakhekile ukuba izaku thini na. Xa kujongwe kuye, avele esithi, owam uMalume wabonga ithuba eKatini & yamvuma.
‹ Oonobubi – Yi-Agency yeModelling leyo	› Yabuza indoda ukuba iphose ntoni emva kwe-75 days